Ogaden News Agency (ONA) – Daggaalka Cusub ee Biyaha Nile oo Cirka iskusii shareeraya aduunkuna isha ku hayo
Daggaalka Cusub ee Biyaha Nile oo Cirka iskusii shareeraya aduunkuna isha ku hayo
Posted by ONA Admin	/ June 12, 2013
Madaxweynaha Wadanka Masar Madaxweyne Mursi ayaa mar uu la hadlayay shacabweynaha muslimiinta ah ee wadanka Masar waxa uu u sheegay, “In Wabiga Niil uu yahay deeq uu Allaah siiyay Wadanka Masar” Ma aanu rabno daggaal in aan la galno wadanka Ethiopia waxaana noo socda Wadahadal, Waxaase furan wado kasta oo aan ku difaacayno Biyaha Wabiga Niil.
Kadib markii Madaxweynaha Masar uu hadalkaas adag ee muujinaya in Dowlada Masar ay daggaal iyo nabadba diyaar u tahay. Waxaa islamarkiiba dowlada Ethiopia ay u yeedhay safiirka Masar u jooga Addis Ababa. Waxayna weydiiyeen innuu ka bixiyo faah faahin go’aanka wadanka Masar. Arintaas oo walbahaar ku abuurtay gumeysiga Ethiopia.
Gumeysiga Ethiopia waligiis muusan haweysan innuu biyo xidheenkan oo kale uu sameeyo. Balse hadiyo jeer waxay ku riyoon jireen inay maalin ay biyaha Niil ay ka xidhi doonaan wadanka Masar.
Dowladihi Wadanka Masar oo ahaa dowlado ay hoggaminayeen dad Saraakiil ah oo Xoog Miltary wadanka ku maamula waxay sabab u ahaayeen inay cabsi galiyaan wadanka Ethiopia. Iyaga oo hadiyo jeer bixin jiray hanjabaado ficliyan ah oo ay ku wiiqayaan xooga iyo tayada wadanka Ethiopia.
Wadanka Masar waxa uu hubeyn jirey Mucaaradka Ethiopia sida Eritrea, Sidoo kale waxuu saaxibo la ahaa Wadanka Somalia. Ethiopia waxay eega ka faa ideysanaysa Dowlada Masar oo isbadal ka dhacay, iyo geeska Afrika oo dowlad xoog badan oo khatar ku ah jiritaanka Wadanka Ethiopia ka jirin. Madama Somaliana ay burburtay, Dowada Sudana ay dhibaatoyin adag ka dhex jiraan.
Masar waxa ay muujisay jiljileec badan iyaga oo muddo dheer korka ka daawanayay waxa ay dowlada Ethiopia waddo.
Madaxweyanaha Masar Madaxweyne Mursi Hadalkiisa uu sheegay in Ethiopia jid kasta u furanyahay waxaa ku dhaliyay mucaaradka Xisbiyada badan ee talada lawadaagaya. Iyo Dowladiisa oo mucaarad badan yeelatay. Waxayna u tahay imtixaanka ugu weyn ee uu mari doono.
Dhinaca kale Gumeysiga Ethiopia oo ka jawaabaya fariintaas ayaa iyana warbaahinta caalamka u sheegay in Biyo Xidheenka Wabiga Niil uu sii socon doono wax ka hor istaagi karana uusan jirin.
Ethiopia maxay u rabta inay Biyaha Niil u joojiso
Gumeysiga Ethiopia dadka talada u haya waa qowmiyada tirada yar ee Tigreega oo hoggaaminayaan xisbigooda TPLF. Xisbigan ayaa in muddo aheydba ku howlanaa sidii ay usameysan lahaayeen lacago dag dag ah oo ay ku xukumaan shacabka 100 million ee Ethiopia. Si ay dadkaas u sii guumeystaan waxay arkeen inay u baahanyihiin lacago aad u badan. Sidoo kale waxay ogaaden in deeqaha lasiin jiray wadankaas layareyn doono sanadka 2025. Waqtigaas oo laga yaabo in gabi aahnba deeqaha lasiiyo dunida ay aad u yaraato.
Hadaba meesha kaliya ee ay lacag ka heli karaan waxay u arkeen inay dhulka Ethiopia ka gadaan shirkado. Iyo inay Wabiga Niil biyo xidheen kasameystaan si ay Biyaha korontada ka dhasha uga gadaan wadamada Afrika midaas oo ay ka heli doonaan lacag aysan waliigeed Ethiopia horey u helin.
Gumeysiga Ethiopia ma uu dhaawacayo kaliya shacabka ree Masar ee waxa barnaamijyadan ay dhaawac weyn ku keenay malaayiin Ethiopian ah oo burburiyay nolol maalmeedkooda.
Sidoo kale waxa uu saameyn ku keensan doona malaayiin kale oo shacabka ree masar ah oo ku noola biyaha wabiga niil.
Daraasado ay wadanka Masar sameysay waxaa ay sheegayaan in Biyaha wabiga Niil ee wadanka Masar uu yaraan doono 25%. Midaas oo xattaa ay suurto gal tahay in wabiga niil looga gudbo awr iyo waxii lamid ah xawaaraha iyo biya yarida ku imaan doonta awgeed.
Wali ma cadda talaabada dhabta ah ee wadanka masar ay qaadan doonto, balse waxaa eega ay arrintan isku shareertay cirka iyada oo xamaasad cusub iyo daggaal cusub oo dhinacyo badan ah ka bilaaban doono labada dhinac.